Saynisyahano ku sugan Shiinaha ayaa rumeysan in dawadan cusub ay joojin karto faafitaanka 'tallaal la'aan' – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Saynisyahano ku sugan Shiinaha ayaa rumeysan in dawadan cusub ay joojin karto...
Saynisyahano ku sugan Shiinaha ayaa rumeysan in dawadan cusub ay joojin karto faafitaanka ‘tallaal la’aan’
Cudurka dillaacay ayaa markii ugu horreysay ka soo baxay Shiinaha dhammaadkii sanadkii hore ka hor inta uusan ku fidin adduunka oo dhan, taas oo keentay in tartan caalami ah uu raadsado daweyn iyo tallaallo.
Daawooyin ay tijaabinayaan saynisyahano ka tirsan jaamacadda caanka ah ee Peking University ma soo koobi karo oo keliya waqtiga soo kabashada ee dadka cudurka qaba, laakiin waxay xitaa siin karaan kahortag waqti-gaaban fayraska, cilmi-baarayaashu waxay leeyihiin.
Sunney Xie, oo ah agaasimaha jaamacada ee magaalada New Innovation Center for Genomics, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in daroogada lagu guuleystey marxaladda tijaabada xayawaanka.
“Markii aan ku durayo kahortagga unugyada unugyada jiirka cudurka, shan maalmood ka dib rarida fayraska waxaa hoos loo dhigay 2,500,” ayuu yiri Xie.
“Taasi micnaheedu waa daroogada suurtagalka ah waxay leedahay (a) saameyn daaweyn ah.”
Dawadu waxay isticmaashaa unugyada ka hortaga ee antibiyootiga – oo ay soo saartay nidaamka difaaca jirka ee bini aadamka si looga hortago viruska infekshinka unugyada – kaasoo kooxda Xie ay ka go’day dhiiga 60 qof oo soo kabsaday.
Daraasad lagu sameeyay cilmi-baarista kooxda, oo lagu daabacay Axadda joornaalka sayniska ee cilmiga ah, ayaa soo jeedinaya in isticmaalka unugyada difaaca jirka ay bixiyaan “dawayn” suurtagal ah cudurka isla markaana soo gaabinaysa wakhtiga soo kabashada.
Xie wuxuu sheegay in kooxdiisu ay shaqeyneysay “habeen iyo maalin” iyagoo baadi goobaya waxyaabaha ka hortaga.
“Khibraddeenna ayaa ah unugyada unugyada unugyada ah halkii ay ka ahaan lahayd immunology ama virology. Markii aan ogaanay in unugyada unugyada unugyada unugyada unuggu ay si wax ku ool ah u heli karaan kahortagga halista unugyada aan ku faraxnay.”
Wuxuu intaas ku daray in dawadan ay diyaar u tahay in la isticmaalo dabayaaqada sanadkaan iyo waqtiga loogu talo galay cudur kasta oo ka dilaaci kara jiilaalka, kaas oo uu ku dhacay 4.8 milyan oo dad ah oo ku nool daafaha dunida oo ay dileen in kabadan 315,000.
Xie ayaa yidhi, “qorshaynta tijaabada caafimaad ayaa socota” ayuu yidhi Xie, isaga oo intaas ku daray in laga fulin doono Australia iyo wadamo kale maadaama kiisasku ku yaraadeen Shiinaha, iyada oo la siinayo tiro yar oo doofaarro gubaar ah si loo baaro.
“Rajada ayaa ah in unugyada noocan ah ee difaaca jirka ay noqdaan dawooyin takhasus leh oo joojin kara cudurka,” ayuu yiri.